RASMI: Tottenham Oo Erik Lamela + Lacag Kusoo Iibsatay Bryan Gil ( Waa Kuma Xiddigan?) – Garsoore Sports
RASMI: Tottenham Oo…
Kooxda kubbada-cagta ee Tottenham ayaa sameeyay saxiix cusub saacadihii ugu dambeeyay kaddib markii ay heshiis isdhaafsi cayaartooy ah kooxda Sevilla kagala soo wareegeen weeraryahan Bryan Gil.
Gil waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu xiisaha iyo mustaqbalka wanaagsan xulka kubbada-cagta Spain. Laacibkan ayaa ah xiddig garabka biddix ka ciyaara, wuxuu sidoo kale ka ciyaari karaa middigta wuxuuna si gaar ah ugu xeel dheer yahay hormarinta kubbadaha sanduuqa dhexdiisa laga helo iyo sidoo kale adeeggiisa garabyada. Waxaa loo maleynayaa in macalin Nuno Espirito Santo uu ka shaqeyn doono sidii uu ugu horumarin lahaa tayo dhan walba leh oo sidoo kale ka ciyaari kara bartamaha nambarka 10aad.
Gil, oo haatan ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa xulkiisa ku metalaya cayaaraha Olombikada waxaana lagu soo waramayaa inuu kooxda Spurs haatan ugu biirayo lacag dhan 25 milyan oo ginni, laakiin lacagta ayaa ka hooseysa qiimeeyntiisa iyadoo siddaas darteed qeyb looga dhigay Erik Lamela oo isna dhinac kale ku biiray.
Lamela, oo ah xiddigii ugu dambeeyay ee loogu yeero Bale Toddoba, ayaa lagu soo iibiyay lacagtii ka soo baxday iibkii Gareth Bale ee Real Madrid, waxaana lagu soo waramayaa inuu kooxda Sevilla u saxiixayo heshiis seddex sano ah isla markaana uu ka tagayo kooxda Spurs oo uu ku sugnaa tobankii sano ee lasoo dhaafay isagoo ku dhex noqday ciyaaryahan caan ah oo ay aad u jecelyihiin qeybo kamid ah taageerayaasha Tottenham.
Saxiixa 20 jir Isbaanish ah oo cajiib ah oo u muuqda mid saameeyn weyn ku yeelan kara kubbad-cayaareedkooda ayaa waxay taageerayaasha oo dhami ku wada dhejin karaan rajadooda.